Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray masina – desambra 2018 » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Iza moa i Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor Solo ?
Hafatry ny birao maharitry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara »
« Mba hahita fomba fitoriana mifanaraka amin’ny kolontsaina sy ny fomba fiaina ankehitriny ireo manolotena hanao ny asa fitoriana ny Finoana ».
« Ary ny Teny tonga Nofo ka niara-nonina tamintsika » (Jon 1, 14). Efa roarivo taona mahery lasa izay no tanteraka teto anivon’izao tontolo izao izany tenim-pamonjena izany ; manambara ny fahatongavan’Ilay Zanak’Andriamanitra ho olombelona nitondra ny fanavotana sy nitory ny Vaovao Mahafaly. Ny Apostoly sy ny dimbiny no nanankinan’i Jesoa sy nomeny fahefana hampita sy hanohy ny fitoriana io Vaovao Mahafaly io. « Mandehana ianareo, mitoria ny Evanjely amin’ny voary rehetra » (Mk 16, 15).
Na dia teo aza ny taon-jato maro nifandimby sy ny vanim-potoana samihafa nitorian’ny Eglizy ny Vaovao Mahafaly, dia tsy nampiova na nanova na oviana na oviana ny Soratra Masina na ny Tenin’Andriamanitra voarakitra izany. Ny fomba sy ny endrika entina mampita ary mitory ny finoana kosa anefa dia mivoatra sy miova manaraka ny vanim-potoana lalovana mbamin’ny kolontsain’ny Firenena amam-piarahamonina iantefany. Adidy sy andraikitr’ireo mpampianatra sy mpampita ny finoana rahateo mantsy ny mikaroka ao anatin’ny fandalinana sy fikarohana ataony izay fomba sy endrika fitoriana sahaza ary mifanaraka amin’ny vanim-potoana lalovana sy ny fomba mifanaraka amin’izany.
Ny fampianaran’ny Fiangonana ao amin’ny Konsily Vatikana II dia maneho mazava ny fampifanarahana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly mifanaraka amin’ny vanim-potoana lalovana mbamin’ny kolontsaina amam-bako manitra. Ambaran’ny konsily fa « ny Fiangonana : tanatin’ny taona maro mifandimby dia nampiasa ny zava-tsoa nateraky ny kolontsaina samihafa, mba hanelezana sy hampisehoana ny hafatr’i Kristy amin’ny firenen-drehetra tamin’ny fampianarana nataony. Ireo kolontsaina ireo no nentiny naneho sy nandalina tsaratsara kokoa ny hafatr’i Kristy, (…) ary koa tamin’ny toe-piainana samihafa nasehon’ny kristianina » (Konsily Vatikana II, « Ny Fiangonana manoloana ny Andro Ankehitriny, Toko II, 58).
Tsy mitsaha-mivoatra anefa ankehitriny ny vokatry ny fikarohana ara-tsiansa sy ny akon’izany eo amin’ny fanatontoloana. Tsy afa-miala sy misintaka amin’izany ny Fiangonana na dia misy aza ny zava-manahirana aterany, fa vao mainka mandrisika ny saina hahafantatra sy handalina azy bebe kokoa aza. « Ny fikarohana sy ny zavatra hita vao haingana indrindra, mikasika ny fahaizana sy ny tantara ary ny filôzôfia, hoy hatrany ny Konsily Vatikana II, dia mamohafoha tarehin-javatra vaovao mihatra hatramin’ny fiainan’ny olombelona, ka manery ny teôlôjianina hanao fikarohana vaovao. Noho izany (…) asaina mikaroka tsy ankijanona izay fomba mety indrindra ho enti-mampita amin’ny olombelona miara-belona aminy ny fampianarana ny finoana izy ireo » (Konsily Vatikana II, F.A.A., Toko II, 62). Ny Papa François, ao amin’ny Fampianarana apostolika « Ny Hafalian’ny Evanjely », dia mamporisika ny kristianina mahatoky mba hiroso amin’ny dingana fampielezam-pinoana vaovao tarafin’ny hafaliana, ka hanondro lalana vaovao ho an’ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny taona mifanesy izay ho avy.
Ilaina àry ny mahafantatra sy maharaka ny zava-misy ankehitriny manoloana ny fivoarana sy fanantontoloana ary ny vanim-potoana lalovana mba hahafahana mitory ny Vaovao Mahafaly sy mampita ny finoana, indrindra ho an’ireo izay antsoin’Andriamanitra manokana ho amin’ny fitoriana mivantana ny finoana ho fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra.